सामाजिक सीमा र मर्यादा उलंघन गर्दै कस्तो सन्देश दिन चाहनुभएको हो नेपाली समाजलाई ? - Arthasansar
शनिबार, १५ कार्तिक २०७७, ०८ : ३७ मा प्रकाशित
हामी राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले संक्रमणकालमा छौं । संक्रमणकाल समाजका लागि प्रसवकाल हो । प्रसव वेदना सहन निकै गाह्रो हुन्छ, तर सहनुको विकल्प पनि हुँदैन । सांस्कृतिक हिसाबले हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं ? यो निक्कै ठूलो बहस हो । बहस संयमतापूर्वक, तर निकै निर्मम भएर गर्न जरूरी छ
आजभोलिका दैनिक रुपमा आउने गितहरुका अश्लिल
शब्द र त्यस्मा बन्ने भिडियो र सामाजिक संजालमा छाउने एप्सहरुमा हाम्रो संस्कृति, कला, साहित्यको बेइज्जत गर्नमा नारीहरूको शारीरिक सुन्दरता प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।